मन छोयो साभार गरे - khull Postमन छोयो साभार गरे - khull Post
विश्वभर ७३ लाख ३२ हजारभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित निको भए २७ असार २०७७, शनिबार ०७:४६
सरकारले सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने निर्णय गरे पनि किन चलेनन् सार्वजनिक सवारी साधन ? २७ असार २०७७, शनिबार ०७:३१
आज पनि मौसम सफा नरहने, यी क्षेत्रमा छ बाढी र पहिरोको जोखिम २७ असार २०७७, शनिबार ०७:२४
पाँचखाल नगरपालिकाले सन्चालन गरेको आइसोलेशन र क्वारेन्टाइनमा बसेका सँग भण्डारीको अन्तरक्रिया २६ असार २०७७, शुक्रबार १७:३२
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाईटेडद्धारा एस्टन भिल्ला पराजित २६ असार २०७७, शुक्रबार ०८:३२
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यान्छी र नेकपा अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता २६ असार २०७७, शुक्रबार ०८:२४
विश्वभर कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या १ करोड २२ लाख नाघ्यो , साढे ५ लाख भन्दा धेरैको मृत्यु २६ असार २०७७, शुक्रबार ०८:०३
आज देखि जिल्लाभित्र मात्रै चल्न पाउने गरी सार्वजनिक यातायात खुला, मास्क अनिवार्य २६ असार २०७७, शुक्रबार ०७:२६
मन छोयो साभार गरे
राम प्रसाद ढकाल १७ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०८:४१ 257 Views
एउटा बालक सहरको भव्य भवनको घन्टी बजाइरहेको थियो । घरधनी महिलाले ढोका खोलेपछि बालकले हात जोड्दै भन्यो– आन्टी, म तपाईंको बगैँचा सफा गरिदिऊँ ? घरधनी महिलाले भनिन्– अहँ पर्दैन, हामी आफैँ सफा गर्छौं । बालकले हात जोडेरै भन्यो– प्लिज आन्टी, म निकै राम्रोसँग सफा गर्छु, सफा गर्ने अनुमति दिनुहोस् न ! बालकको कुरा सुनेर मनमा दया पलाएपछि उनले सोधिन्– ठीक छ, तिमी सफा गर्न सक्छौ । तर, कति पैसा लिन्छौ नि ? बालकले भन्यो– मलाई पैसा चाहिँदैन, खाना दिनुभए हुन्छ । महिलालाई बालक निकै भोको रहेछ भन्ने लाग्यो । उनी किचनमा गइन् र उसका लागि खाना ल्याइदिइन् र भनिन्– ल बाबु, तिमी पहिला खाना खाऊ अनि काम गर । बालकले जवाफ दियो– पर्दैन आन्टी, पहिले म काम नै पूरा गर्छु ।
करिब एक घन्टामा बालकले काम सिध्याएर महिलालाई काम देखायो । काम देखेर उनी निकै खुसी भइन् । उनले बालकलाई खाना ल्याइदिइन् । तर, बालकले खाना खानुको साटो झोलामा खन्याएर पोको पा-यो । त्यो देखेपछि ती महिलाले उसलाई त्यसको कारण सोधिन् । बालकले जवाफ दियो– घरमा आमा निकै बिरामी हुनुहुन्छ ।
औषधि त सरकारी अस्पतालबाट निःशुल्क पाइयो । तर, औषधि खाली पेटमा खान मिल्दैन । बालकको कुरा सुनेपछि महिलाका आँखा रसाए । उनले आफ्नै हातले बालकलाई खाना खुवाइन् । उसकी आमाका लागि तात्तातो खाना तयार गरेर बालकसँगै उसको घर गइन् । बालककी आमासित भेटेर भनिन्– बहिनी ! तपाईंले आफ्नो सन्तानलाई जुन अमूल्य संस्कार दिनुभएको छ, त्यो हामीले आफ्ना सन्तानलाई कहिल्यै दिन सकेनौँ । तपाईं धन्य हुनुहुन्छ । (साभार : मुकुन्द कार्की)CP
राजन श्रेष्ठ द्वारा लोक लयमा रचित ”किसान” कविता
आत्मराम न्यौपानेको कविता “पीपलको बोटमुनी”
आत्मराम न्यौपाने द्वारा रचित “गाउँले जीवन” शीर्षकको कविता
हरिप्रसाद ढकाल द्वारा वंशस्थ छन्दमा रचित ‘मन’ शीर्षकको कविता
विश्वभर ७३ लाख ३२ हजारभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित निको भए
सरकारले सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने निर्णय गरे पनि किन चलेनन् सार्वजनिक सवारी साधन ?
आज पनि मौसम सफा नरहने, यी क्षेत्रमा छ बाढी र पहिरोको जोखिम
पाँचखाल नगरपालिकाले सन्चालन गरेको आइसोलेशन र क्वारेन्टाइनमा बसेका सँग भण्डारीको अन्तरक्रिया
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाईटेडद्धारा एस्टन भिल्ला पराजित
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यान्छी र नेकपा अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता
विश्वभर कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या १ करोड २२ लाख नाघ्यो , साढे ५ लाख भन्दा धेरैको मृत्यु
आज देखि जिल्लाभित्र मात्रै चल्न पाउने गरी सार्वजनिक यातायात खुला, मास्क अनिवार्य